Eduardo Punset anofa. 6 mabhuku eanonyanya kuteverwa sainzi popularizer | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Noticias
Mabhuku aEduardo Punset
Nhasi takamuka nenhau dzinosuwisa dze kufa kwaEduardo Punset. Munyori uye mutauri wekuparadzira sainzi nevamwe vaverengi muSpain vaive 82 makore uye handina kukwanisa kukunda a cáncer akatambura kubvira 2007. Anozivikanwa nebasa rake uye rake chimiro chakasiyana uye chimiro kuti utaure, tisiye a yakakura sainzi. Izvi ndizvo kusarudzwa kwe6 yemabhuku ake asingaverengeke yakagadzirirwa kudzamisa ruzivo rwehunhu hwevanhu.
2 Mabhuku e6
2.1 Rwendo rwekuda
2.2 Rwendo kune tariro
2.3 Rwendo rweupenyu
2.4 Chii chinoitika mukati medu
2.5 Tsamba kuvazukuru vangu
2.6 Chiroto chaAlice
Akapedza kudzidza mukati Mutemo kubva kuYunivhesiti yeMadrid uye akawana degree raTenzi mu Zvehupfumi Sayenzi by the University of London, kwaaive mupepeti ku BBC. Aive zvakare director wezvehupfumi weLatin America yepepanhau The Economist uye akashanda pamwe FMI muUnited States uye muHaiti.
In the Kuchinja Akashanda seGurukota reEuropean Communities naAdolfo Suárez uye seMari Counsellor weGeneralitat naJosep Tarradellas. Vakatevera zvinzvimbo zvakasiyana mumakambani eruzhinji neakazvimirira. Asi kune ruzhinji rwevanhu rucharamba ruchingoita sa munyori wemabhuku mazhinji pasainzi inozivikanwa uyo zvakare akabudirira kwazvo paterevhizheni, achitungamira uye achiratidzira iyo showa Nets.
Na kuzvibatsira kubatsira kubata Pamusoro pekuparadzirwa kwesainzi, mabhuku aPunset anobata matanda ese eruzivo rwevanhu. Izvi ndizvo zvimwe.
La kufungidzira uye kuyedza kutsanangura rudo, iyo yakasimba kwazvo manzwiro, kubva pakuona kwema shanduko uye biology. Nekuti shanduko yetekinoroji iri kubvumidza chidzidzo ichi kuburikidza neiyi migero. Anotaura zvakare nezve kiyi yesainzi kuti unzwisise rudo, mamiriro ayo ekugadzirisa uye zvikamu zvawo: chinhu chinogadzirwa nemajini, chishuwo chebonde, kemesitiri uye fungidziro, sarudzo yemudiwa, kuzvipira kuve mubereki, kusuwa kwemoyo nemhedzisiro yaro kana manejimendi ayo ...
Kune chitsauko chekupedzisira kwaanofunga nezve iyo formula nezve kugona kuda uye kupa a kuongorora bvunzo kune muverengi.
Tenga icho pano
Rwendo kune tariro
Kwaanokwanisa kufambisa kuti vanotitevera Pane zvakawanda zvikonzero bheji kuti ramangwana zvichave nani. Kune izvi tinogona kutsigira nekushandira mu kufambira mberi kwesainzi nguva dzose. Punset anoramba zvakare kuti kune mhirizhonga yemapuraneti, anotsigira kugoverwa patsva kwebasa uye anoyambira kuti tarisiro yeupenyu inowedzera makore maviri nehafu makore gumi. Zvakare, rangarira izvo hazvichakwanise kurarama pasina masocial network uye zvinodikanwawo kudzidza ku gadzirisa manzwiro.
Mazhinji kubhejera kwehupenyu maratidziro kupfuura pfungwa senge kunzwira tsitsi uye kuziva vanogona kuchinja ramangwana. Vaviri vakaita kukwakuka kwehunyanzvi mune ino tekinoroji semotokari yekudzivirira kuzviparadzanisa nevamwe uye rubatsiro rwataimboda kubva kune vatatu kana nharaunda yedu yepedyo.
Chii chinoitika mukati medu
Chidzidzo chakakosha kuti tinzwisise uye tinzwisise pachedu ndechekuti kuzviziva, ziva kuti tiri sei. Ndiyo kiyi yekudzidza kuzvibata pachedu mukati nekunze. Kutibatsira pabasa iri sainzi, inotsigirwa na zviitiko nezvipupuriro zvezvakawanda zvemakesi chaiwo.
Tsamba kuvazukuru vangu
Zvichida basa rake repamoyo uye nenhaka yekuziva uye yekushinga chese chaakadzidza, aine pfungwa yekuzviratidza mune ramangwana anomiririrwa nevazukuru vake uye nevateveri vake vese. Iye anoshuva kupatsanura iwo mazano makuru akachinja nzira yake yekuona nyika, kubva parudo rwake rwesainzi rwakatapuriranwa naamai vake kuenda kusingaperi kwake kuda kwekuramba achidzidza.
Punset inotora zita re Alicia mune zvarinoreva zvechiGiriki zve «chokwadi», Kuti utaure basa rizere nemhinduro uye yakavhurika mibvunzo. Izvo zvakare iri bheji retariro neramangwana iyo inotsigira zvitsva nezvazvino zvesainzi zvakawanikwa. Zvese zvakaputirwa muchimiro che "kurota" uko kunyepa uye chokwadi zvinofambidzana uye zvinowirirana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Eduard Punset anofa. 6 mabhuku kubva kunonyanya kuteverwa sainzi mukurumbira